11 Apple TV + magacaabida abaalmarinta NAACP Sawirada | Waxaan ka socdaa mac
11 Magacaabista Apple TV + ee Abaalmarinta Sawirka NAACP
Apple TV + marna ma joogsanayo inuu naga yaabsado. Wararka ayaa sheegaya in dadka isticmaala badankood ma cusboonaysiin doonaan adeega mar haddii ay dhammaatay muddadii firaaqada ahayd ee shirkaddu ku bixisay iibsashada qalabka. Dhinaca kale waxaan haynaa inay si xoog leh kor ugu kacday dadka isticmaala mahadsanid filimka Palmer. Ted Lasso ayaa ku guuleysanaya iyo in si weyn loo amaano oo magacaabistu ay muujiso. Hadda abaalmarinta NAAC ee dhici doonta dhammaadka Maarso, ayaa la doortay illaa 11 soo-saaris ah oo loo magacaabayo abaalmarinno shaqsiyeed. Apple TV + waxay umuuqataa marwalba oo lamid ah tayada.
Waxay umuuqataa inay tahay inaan aqbalno sida wanaagsan doodaha ay soo jeediyeen kuwa masuulka ka ah Apple TV + oo ay ku sheegeen in adeega loogu talagalay in la siiyo isticmaalaha tayo leh halkii tiro laga heli lahaa. Annaga oo tixgelinayna magacaabista ay soo-saarkooda qaarkood helayaan, waa inaan ku aaminnaa iyaga qiime ahaan Dabcan, waa inay sidoo kale ka fikiraan in qaddarku uu dadka isticmaala ka dhigayo inay u saxiixaan adeegga, maxaa yeelay wax caadi ah maahan in xilliyada horyaalku ay aad u hooseeyaan taasna waxay ka dhigeysaa daawadayaasha inuu daalayo. Waxaan ka nool nahay ka dheereeya Apple TV + oo cusbooneysiiya taxanahiisa.
Muhiimadu waa taas Abaalmarinta NAAC way aqoonsadeen Waxsoosaarka 11 ee musharixiinta isla tirada abaalmarinta kaas oo la bixin doono dhammaadka Maarso iyada oo loo marayo dhagaystayaal dhagaysan. Waad u codayn kartaa qayb ka mid ah qaybaha, waxa kaliya ee ay tahay inaad samayso waa inaad raacdo isku xidhka ku habboon. Barnaamijyada la magacaabay waa:
Jilaaga ugu fiican Filimka: Anthony Mackie, Bankiga
Taxanaha Animated ee Ugu Fiican: dhexe Park
Tilmaamaha ugu Fiican ee Taxanaha Majaajillada: Aurora Guerrero, Little America "Jaguar The"
Ka-qaybgalka gaarka ah ee taxanaha: The tusaysa
Filim madax banaan: Bankiga
Atariishada Ugu Taageerada Badan: Nia Long by Bankiga
Taxanaha Wadahadalka Ugu Fiican: Wadahadalka Oprah
Noocyada ugu fiican: Verzuz (Muusikada Apple)
Shaashadda ugu Fiican ee Taxanaha Majaajillada: Lee Eisenberg, Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon for Little America "Dhagaxii"
Qoraalka majaajilada: Rajiv Joseph for Little America "Maareeyaha"
Qoraalka Taxanaha Riwaayadda: Jessica Lamour by Little Voice Waad aragtaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » 11 Magacaabista Apple TV + ee Abaalmarinta Sawirka NAACP
Xanta cusubi waxay muujineysaa in gaariga Apple uu imaan karo isteerin la'aan